Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods)
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods)
1 Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 26th April 2010, 9:08 pm
အားလုံးလည်း သိကြတဲ့ အတိုင်း အပေါ်က Link မှာ ကျွန်တော် Member တွေကိုပါ ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေချင်တဲ့ အတွက် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိသလောက် member တွေကတော့ ပြင်မယ်လို့မထင်ဘူး။ ၈၀% သေချာတယ်။ မပြင်မှာ။
အဲဒီ့တော့ ကျွန်တော်တို့ကဘဲ ပြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ စထားတဲ့ Topic တွေက စပြင်လိုက်ရအောင်။ (ဟူး။ ငါတော့ သေပြီ။ ၂၀၀ ကျော်စမိထားတယ်။ )
ပြီး၇င် Member တွေရဲ့ Post တွေကိုလည်း [You must be registered and logged in to see this link.] အဲဒီ့ အတိုင်းသေချာပြန်ကြတာပေါ့။
အားလုံးရဲ့ အင်အားရှိနေရင် ကျွန်တော်လည်း ရှေ့ဆက်သွားရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူတာပေါ့ဗျာ။
အားလုံးဘဲ လောလောဆယ်မှာ အဲဒီ့ Tag လေးတွေ ထည့်ပေးကြပါနော်။
ကို mars ပေးသလို ရွေးလိုက်တာနဲ့ ထည့်လို့ရအောင်တော့ ကျွန်တော် လုပ်ကြည့်နေတယ်။
Tag ထည့်တဲ့အခါမှာ Topic Title နဲ့ Space ဘားလေး ခြားပြီးထည့်ပေးပါ။
အပြင်မှာ ပြောလို့မကောင်းလို့ မပြောရတာရှိရင် ဒီ Office ထဲမှာ ပြောပါနော်။
2 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 26th April 2010, 9:41 pm
မနက်ဖြန်ကနေစပြီး လုပ်ပေးမယ်... ဒီနေ့တော်တော်ကိုမအားလိုက်လို့.... အခုပြန်ခါနီးမှ ၀င်ဖြစ်တာ... အရင်ဆုံး ကိုယ့်ပို့စ်ကို ကိုယ်ပြင်ရမယ်....
3 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 27th April 2010, 8:48 am
Article Page တွင်ရှိသော post များအားလုံး နှင့် အချို့ သော post များအား tagging လုပ်ပြီးပါပြီ။
4 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 27th April 2010, 8:56 am
Help Zone က Post တွေ လောလောဆယ်ပြင်ပေးထားမယ်
1.Hardware Problem Finished
2.Software Problem Finished
3.Internet Problem Finished
4.Networking Problems Finished.
5.Programming Problems Finished.
6.Web Developing Problems Finished.
7.Windows Problem Finished.
8.Linux Problems Finished.
9.Mac Problems Finished
10.Computer Problems Finished.
11.Virus Problems Finished.
12.Other Problems Finished.
i'm going to smoking.
Last edited by solakoko on 27th April 2010, 10:29 am; edited 13 times in total
5 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 27th April 2010, 8:57 am
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ကျေးဇူးတင်တာ။
ပြီးတော့ တော်တော်လည်း အားရမိတယ်။
အခုလို တက်ညီလက်ညီ လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်လိုက်ကြရင် ၊ ဘယ်ပြေးမလဲ မြန်မာ့ အကောင်းဆုံး IT Community.
ဆက်လက်ချီတက်ကြရအောင်.... (ကောက်ရိုးမီးလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်အောင် အရှိန်အမြဲမြှင့်ထားနော်)
ကျနော်လည်း လုပ်စရာရှိတာကို အမြဲလုပ်ပေးနေမယ်။
6 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 27th April 2010, 11:45 am
တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး(၁၅)ခု လုပ်ပေးပါ့မယ်ဗျို့..
7 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 27th April 2010, 1:30 pm
ကျနော် အမြဲတမ်း လိုအပ်တာ ဖြည့်ပေးနေတာကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်...
မနေ့ညကလည်း အကြံပေးချက်ကို တစ်ခါတည်း အပြီးလုပ်ပေးလိုက်တယ်လေ။
8 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 27th April 2010, 2:00 pm
ကိုယ်တင်ထားတာကို အရင်ဆုံးပြင်မလို့ပါပဲ... ဒါပေမယ့် လိုက်ရှာနေရင်ကြာနေမှာစိုးလို့ မထူးဘူးဆိုပြီး တစ်ပိုင်းချင်းစီရှင်းမယ်ဆိုပြီး Software ထဲက PC Maintenance ကိုအရင်ဆုံးလုပ်တယ်... အဲဒိမှာ Tuneup တွေကိုပေါင်းပေးလိုက်တယ်... နောက်ပြီး Hiren Boot CD ကိုပေါင်းပေးပြီး software လို့တပ်ပေးတဲ့အခါမှာ လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်... အဲဒါတစ်ချက်လောက်စစ်ပေးပါဦး....
9 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 27th April 2010, 5:29 pm
ကဲ.. Help Zone တော့ပြီးသွားပြီ
GENERAL TECHNOLOGY က Reverse Engineering ကို စပြင်ပေးမယ်
10 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 27th April 2010, 6:49 pm
GENERAL TECHNOLOGY က Reverse Engineering ပြီးသွားပြီ..
လောလောဆယ် Portal ကအမြင်မတော်တာတွေပြင်ပေးသွားမယ်
ပလိုင်းပေါက်နဲ့ ဖားကောက် သလိုဖြစ်နေလို့ နော်
11 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 29th April 2010, 5:42 pm
MITR Products ပြီးပါပြီ။ PROGRAMMERS ZONE ရှိ Java ပြီးပါပြီ။ Ubuntu, Red Hat (Linux Platform) ပြီးပါပြီ။ ကျန်တာများကို ဆက်လုပ်ပါဦးမည်။
Last edited by ထက်နိုင် on 5th May 2010, 1:48 pm; edited2times in total
12 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 2nd May 2010, 10:19 pm
အခု ဖိုရမ်တစ်ခုလုံးကို Tag လုပ်နေတာလည်း အစ်ကိုတို့ အားလုံးပါဘဲ
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က Tag လုပ်ဖို့တော့ မမေ့နေကြပါနဲ့ဗျာ...
ဘာ Tag ရမှန်းမသိရင် ၊ ဒါမှမဟုတ် ၊ ကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့ List ထဲမှာမပါသေးရင် စဉ်းစားမိတာကို suggest လုပ်ဖို့လည်း ခဏခဏပြောပါတယ်
ကျွန်တော့်ကို အတော်လေး အားလျော့စေပါလားဗျာ....
Admin ၃ ယောက်မှ ၂ ယောက်က inactive.
Mod တွေအများကြီးမှာ ၃ ၊ ၄ ယောက်ဘဲ Active.
ကျွန်တော် တစ်ကောင်ထဲ ရုန်းတော့ရော ၊ ဒီ နွံက လွတ်မှာလား..........
13 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 3rd May 2010, 8:08 am
SYKO wrote: ဒါမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလားလို့ဗျာ...
ဖိုရမ်မှာ မတင်သင့်တဲ့ post ဖြစ်သွားလို့ လား။ ဒီလိုဆိုရင် ပြန်ဖျက်ပေးပါမယ်။ ချိတ်ချိုးနဲ့ နော်။ တားလဲချိတ်ချိုးဝူး။ [You must be registered and logged in to see this image.]
14 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 3rd May 2010, 11:15 am
အကိုတို့ရေ ကျွန်တော်ဒီနေ့မှ သေချာပြန်ဝင်ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးပါလားဗျာ ၊ အရင်၂ ပတ်လောက်က ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အလုပ်
တစ်ခုကြောင့် အွန်လိုင်းကို မတက်နိုင်ပါဖူး ၊ ဖိုရမ်နဲ့လည်း ကင်းကွာခဲ့တာတော်တော်ကြာသွားတယ်
ဒါကြောင့်မို့ပါဗျာ ။ ကိုဆိုက်ကိုတို့လည်း သိပါတယ် ၊ ကျွန်တော်ဘာကြောင့် မ၀င်နိုင်လည်းဆိုတာ
အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ တစ်ခေါက်လောက် ပြောပြပေးပါနော်
15 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 3rd May 2010, 3:49 pm
ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ကိုဆာမူရိုင်းရေ... လုပ်ရမှာကတော့ အပေါ်မှာအသေးစိတ်ပြောပြထားတာပဲ... အဲ .. အလွယ်နည်းသိချင်ရင်တော့ ကျနော်ပြောမယ်.... ရှင်းခနဲသိအောင်လေ ပို့စ်တွေရဲ့ ခေါင်းစဉ်ဘေးမှာ အမျိုးအစားခွဲပေးဖို့... အဲလိုခွဲဖို့အတွက် ပို့စ်ကို edit လုပ်လိုက်ရင် အဲဒိပို့စ်ရဲ့ ဘေးမှာ choose your tag ဆိုတာမှာ ၀င်ပြီး ဆိုင်ရာတစ်ခုရွေးပေးပြီးရင် အကြမ်းဖျင်းတော့ရပြီ... အသေးစိတ်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း software ဆိုရင် antivirus software တို့ ဘာတို့ဆိုပြီး နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပေးရုံပါ...
16 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 3rd May 2010, 8:56 pm
မသင့်တော်တဲ့ ပိုစ့်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး...
ကို ထက်နိုင် Tag လုပ်ဖို့ မေ့နေလို့ပါ...
မော်မော် တစ်ယောက်ကတော့ Tag လုပ်ဖို့ မမေ့နေသင့်ဘူးလေ...
17 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 4th May 2010, 3:10 pm
Min Min တို့ Maw Maw တို့ ရေ.
ကျနော့် (၁) ပတ်လောက် အင်တာနက်ပြတ်နေဦးမယ်ထင်တယ်.
Server လဲ ပျက်....
Internet Bill လဲမဆောင်ရသေးဘူး..
(၁) ပတ်လောက် အဆက်အသွယ်ပျက်မယ်ထင်တယ်နော့်...
အလုပ်အားတဲ့ အချိန်လောက်မှ ၀င်ဖြစ်မယ်ဗျို့ ...
18 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 4th May 2010, 6:22 pm
SYKO wrote: မသင့်တော်တဲ့ ပိုစ့်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး...
နောက်ဆို ဒီလိုမဖြစ်အောင် သတိထားပါ့မယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
19 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 5th May 2010, 12:01 pm
အဲဒီ့ Link မှာရှိတာတွေက Global News or Local News Tag တွေဖြစ်ရပါမယ်...
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Article News ဆိုတဲ့ Category ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ၊ သတင်းဆောင်းပါး ကို ပြောချင်တာပါ... သတင်းသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ဆောင်းပါးဆန်ဆန်ရေးထားတဲ့အတွက်ပါ....
နောက်ပိုင်း Category ချုံ့ရင် News Zone အနေနဲ့ဘဲ ထားမှာဆိုတော့ အခုလုပ်ထားတဲ့ [Article] ဆိုတဲ့ tag တွေကို တော့ ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။
ပြီးတော့ ဘာ tag ရမှန်းမသိတာ ၊ သို့မဟုတ် ၊ tag အသစ်ထပ်ထည့်တာ ရှိရင် ကျွန်တော့်ကို အသိပေးပါဦးနော်....
Category ခွဲဖို့ အချိန်ရောက်တော့မယ်.
20 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 5th May 2010, 1:18 pm
Tag လုပ်တာ နည်းနည်းလောက် လောပေးကြပါနော်...
ကျွန်တော် Category စပြောင်းဖို့ အဆင့်လုပ်ချင်နေပြီ။
၅ လ ပိုင်း မကုန်ခင်မှာ အပြီးသတ်ပြင်ဆင်ကြရအောင်။
21 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 6th May 2010, 12:37 pm
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Register လုပ်တာ
The administrator has limited the number of registrations by day
and by IP. Please try again later.
ဆိုပြီး ပြောနေတယ်။ အဲလိုလုပ်ထားလား။
22 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 6th May 2010, 7:19 pm
အခုနည်းနည်းလေးပြောစရာရှိလာလို့... ပို့စ်တွေကိုတင်တဲ့အခါ tag ရွေးဖို့ကို ကျန်ကျန်နေကြလို့... အသစ်တင်တဲ့အခါ post title မပါရင် တင်လို့မရသလို tag မပါရင် ပေးမတင်ထားရင်ကောင်းမယ်နော်... tag ပါမှ ပို့စ်ကို တင်ဖို့အတွက် လက်ခံလိုက်ရင်ကော... အဆင်ပြေမလား ???
23 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 6th May 2010, 7:50 pm
mars wrote: အခုနည်းနည်းလေးပြောစရာရှိလာလို့... ပို့စ်တွေကိုတင်တဲ့အခါ tag ရွေးဖို့ကို ကျန်ကျန်နေကြလို့... အသစ်တင်တဲ့အခါ post title မပါရင် တင်လို့မရသလို tag မပါရင် ပေးမတင်ထားရင်ကောင်းမယ်နော်... tag ပါမှ ပို့စ်ကို တင်ဖို့အတွက် လက်ခံလိုက်ရင်ကော... အဆင်ပြေမလား ???
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်။ ကို mars ပေးတဲ့အကြံတွေကတော့ အကြံကောင်းတွေချည်းပဲ။
တစ်ရေးနိုးမှပေးလို့ နဲ့ တူတယ်။(တစ်ရေးနိုးသော် အကြံပေါ် ပေါ်သည့်အကြံ ခြောက်သောင်းတန်)တဲ့။ ပြန်အိပ်ရန်မဟုတ်ဘူးနော်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
24 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 6th May 2010, 8:30 pm
IP နဲ့ Limit လုပ်ထားတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်... တစ်ရက်ထဲ အများကြီးလုပ်ပေးလိုက်ရင် BOT တွေဝင်လာမှာစိုးလို့ပါ...
နောက်တစ်ရက်မှ လုပ်တာ ၊ ဒါမှမဟုတ် ၊ IP ပြောင်းပြီးလုပ်လိုက်ရင် ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခု ကို မားစ် ပေးတဲ့ အကြံလည်း မဆိုးဘူးဗျ ၊ အကြံကောင်းတွေချည်းဘဲ.
25 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods) on 7th May 2010, 9:23 am
အခု တော်တော်များများ Post တွေမှာ tag တွေ လွဲမှားနေတာတွေ တွေ့နေ၇တယ်ဗျ...
ကျွန်တော် ထပ်ခါထပ်ခါပြောပါတယ်.. ကျွန်တော် ထည့်ပေးထားတာ အကြမ်းဖျင်းထည့်ပေးထားတာပါ...
ကိုယ်စဉ်းစားမိတာကို ထပ်ပြီးတော့ ထည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ကျွန်တော် ထည့်ထားတာကိုဘဲ အလွယ်မနှိပ်လိုက်ကြပါနဲ့...
26 Re: Tagging လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (Only Admins & Mods)